Nhema yeKupiwa | Martech Zone
Muvhuro, Kukadzi 15, 2016 Douglas Karr
Imwe yemasiraidhi andinokurukura mune ingangoita hurukuro dzese dzandinadzo nemabhizinesi ndidzo dzandinodaidza kuti ngano yekupa. Mune chero hurongwa hwekuyera, tinosarudza boolean uye discrete mitemo yekuzvibata. Kana izvi, zvino izvo. Icho chinetso, zvakadaro, nekuti haisiriyo nzira yekutenga sarudzo inoitwa. Izvo hazvina basa kana iwe uri mutengi kana iwe uri bhizinesi - hachisi chokwadi cheiyo rwendo rwevatengi.
Nyaya iripo ndeye kutenga kwangu kwe Amazon Echo. Ndakaona iyo buzz online payakatanga kuburitsa, asi ini ndakanga ndisina kana basa nazvo. Panguva iyoyo, iniwo ndakanga ndisiri wekutanga mushandisi. Asi apo ini pandakaendesa zvakanyanya uye zvakanyanya zvebhizinesi redu kutenga kuAmazon, kujoina Prime, uye nekutambira kutumira mukati mezuva rimwe chete, maitiro angu eAmazon akachinja.
Ini ndakanga ndisati ndaziva zvakawanda nezve iyo Amazon Echo, zvakadaro. Rimwe zuva paFacebook, Maka Schaefer akapa chirevo chinonakidza. Akataura kuti aitaura kuAmazon Echo yake zvakanyanya uye zvakanyanya kunge kwanga kuri munhu mumba. Sevose vari vaviri tech geek uye Amazon anofarira, ndakashamisika.
Nehunyanzvi, ini ndingangoti chaive chekutanga kubata kwerwendo rwangu rwevatengi. Ndakafamba kubva paFacebook ndichienda kuAmazon kwandakaverenga peji yechigadzirwa. Yaitaridzika kunge inotonhorera asi ini ndaisakwanisa kunyatso tsigira mari panguva iyoyo. Ini ndakabva ndaenda kune Youtube kuti ndione kuti ndezvipi zvinhu zvinotonhorera zvaiitwa nevanhu kunze kwezvinhu zvekushambadzira.
Ndakadzokera kuAmazon ndikaverenga kuburikidza neye-nyeredzi wongororo uye handina kunyatsoona chero chinhu chingandirambidza kutenga mudziyo ... kunze kana mutengo. Ini ndaisakwanisa kururamisa iyo toyi nyowani panguva iyoyo.
Kwevhiki rinotevera kana senge ndichifamba pawebhu, kumwe kushambadzira kushambadzira kwe Amazon Echo popped up. Ini ndakazopedzisira ndakundwa nechimwe cheshambadziro ndokutenga chishandiso. Ini ndainyora ndima shomanene nezvekuti ndinoida zvakadii, asi handicho chinangwa cheichi posvo.
Chinangwa cheichi posvo ndechekukurukura kuti kutengeswa kweiyi Amazon Echo kwaizonzi kupi. Kana chiri chekutanga-kubata, zvinganzi zvakanzi naMark seanokurudzira ... kunyangwe asiri iye anopesvedzera zvemidziyo uye tekinoroji. Ini ndingati kutaura kwaMark nezve Echo kwaive kweakawanda chiitiko chekuziva murwendo rwangu rwevatengi. Kwete uko pamberi pekutara kwaMarko ndanga ndichiziva nezve hunyanzvi hweEcho uye akasiyana maficha.
Kana iyo yemhando yekumisikidza iri yekupedzisira-yekubata, yakabhadharwa kushambadzira uye kushambadzira patsva kwaizove sosi yekutengesa. Asi ivo vaive vasina. Kana iwe ukandibvunza kuti ndeipi nzira yekushambadzira yakandikurudzira kutenga iyo Echo, ini ndaizopindura:
Yakanga isiri chero zano rimwe chete izvo zvakaita kuti nditenge iyo Echo, yaive ese avo. Kwaive kutaura kwaMark, kwaive kutsvaga kwangu kwemavhidhiyo-akagadzirwa nevashandisi, kwaive kuongorora kwangu kwehurombo kuongororwa, uye kwaive kushambadzira kwekushambadzira. Izvo zvinokwana sei muGoogle Analytic's kutendeuka fanera? Izvo hazviite… sezvo zvisingaite zvakanyanya rwendo rwevatengi.
Ndanyora nezve kunyunyuta kukuru kwekushambadzira uye kupiwa ndiyo kiyi.
Pane imwe nzira asi yakaoma kwazvo. Kufanotaura analytics inogona kucherechedza maitiro ekutengesa kune ese masvikiro uye marongero uye paunenge uchigadzirisa, inogona kutanga kuenzanisa chiitiko chakakodzera kune rese kutengesa. Aya mainjini anogona kuzofungidzira kuti kudzikisa kana kukwidziridza bhajeti kana chiitiko mune imwe nzira yekutengesa zvinokanganisa pazasi mutsara
Sezvo iwe uri kutarisa kune ako kushambadzira kuyedza, zvakakosha kuti iwe uzive kuti kunyangwe kushambadzira iyo isina zvakananga kunzi kushandurwa kune zvakazara maitiro mukutenga kwesarudzo kwevatengi. Uye iko kukanganisa kuri kupfuura-kwedu kwekushambadzira kuyedza - ruzivo rwese rwetarisiro rwunobatsira parwendo.
Heino muenzaniso wakapusa: Une yako chitoro uye unocheka yako yekuchenesa tsvimbo. Hazvisi kuti chitoro chako chakasviba, asi pamwe hachina kuchena sekare. Mhedzisiro yacho ndeyekuti kutengesa kwako kunodonha sevatengi vazhinji vanoguma vanongonzwa kunge kwakachena senge chimwe chitoro chemunharaunda. Iwe unozvidavirira sei izvi mukushambadzira kwako? Iwe unogona kunge wakawedzera yako kushambadzira kushandisa panguva ino asi kwese kutengesa kwakaramba. Iko hakuna "super yakachena" mutsara chinhu mune rako rekushambadzira bhajeti… asi iwe unoziva ine zvine simba.
Nhasi, makambani anoda baseline yezvinyorwa. Kubva pane yakachena, inoteerera webhu saiti, kune inoenderera zvinyorwa zvinovaka kuvimbika kwavo, kushandisa makesi, machena mapepa, uye infographics. Zvese izvo zvinogoverwa, uye kukosha kwakawedzerwa kuburikidza nemagariro nzira. Zvese izvo zvakagadzirirwa kutsvaga injini. Zvese izvo zvinopa kune email tsamba tsamba inosimudzira iyo tarisiro.
Zvese zvakakosha - hapana imwe yaunotengesera imwe. Iwe ungashuve kuenzanisa ivo nenzira kwayo sezvo iwe uchiona yavo mhedzisiro, asi hapana imwe inosarudzika mune yakakwana online kushambadzira kuvepo.
Tags: amazon echobasakutanga-kubata chiratidzoinbound Marketingyekupedzisira-kubata chiratidzonhemangano yekupapredictive analyticskufanotaura chimiro
Mashandisiro Ekushandisa Algorithmic Mutengo Kuwedzeredza purofiti
Kudzosera: Maitirwo eAmazon Anoshanda Sei uye Anotora Nguva Yakareba Sei